#Wasiir Goodax oo madaxda ku shirsan Nairobi ka dalbaday iney shirkooda Muqdisho ku qabsadaan - Get Latest News From Horn of Africa
#Wasiir Goodax oo madaxda ku shirsan Nairobi ka dalbaday iney shirkooda Muqdisho ku qabsadaan
Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya C/llaahi Goodax Barre, ayaa walaac ka muujiyay shir magaalada Nairobi uga socdo madaxweynayaasha maamulada Galmudug iyo Jubaland, Xildhibaano iyo Siyaasiyiin Mucaarad ah.
Wasiir Goodax oo ka hadlayay magaalada Baardheere ee gobolka Gedo, waxa uu sheegay in sharaf dhac ay qaranimada dalkan ku tahay in mas’uuliyiin Soomaaliyeed ay shir ka dhan ah dowladda Soomaaliya ku yeeshaan magaalada Nairobi, xili ay jirto xiisad u dhexeysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya.
Waxa uu ka dalbaday iney shirkooda ku qabsadaan gudaha dalka, walow la ogsoon yahay in dowladda Soomaaliya dhowr jeer Muqdisho ku joojisay shir uu lahaa Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir C/raxmaan C/Shakuur Warsame.
Wasiir Goodax ayaa dhinaca kale sheegay ineysan waxba ka bedeli doonin qodobada shirkaasi kasoo baxa habka ay wax u mamausho dowladda Soomaaliya.
Shirka Nairobi waxaa looga hadlayaa khilaafka dowladda iyo maamul goboleedyada iyo habka loo wajahayo doorashada soo socoto ee dalka ka dhaceyso marka la gaaro sanadka 2020/21.